Madaxweynaha Faransiiska Oo Cambaareeyay Ixtiraam Darro Lagula Kacay Xaaskiisa – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Faransiiska Oo Cambaareeyay Ixtiraam Darro Lagula Kacay Xaaskiisa
(SLT-Paris)-Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay dhiggiisa dalka Brazil Jair Bolsonaro, isaga oo sheegay in uu si qalafsan uga hadlay marwada koobaad ee Faransiiska.
“Arrin xushmad darro ah ayuu ka yiri xaaskayga. Dadka reer Brazil ixtiraam badan ayaan u hayaa, waxa kali ah een samayn karana waa in aan u rajeeyo in ay durba helaan madaxweyne hawsha u taalla qabsada,” ayuu yidhi Macron oo ka hadlay shir jaraa’id oo uu ku qabtay kulanka dalalka G7 ee ka socda magaalada Biarritz.
“Kuma kufsadeen, sababtuna waxay tahay uma qalantid,” ayuu Bolsonaro ku yidhi Maria.
Bolsonaro ayaa sidoo kale guux dhaliyay sannadkii 2017 isaga oo meel fagaare ah ka hadlaya ayuuna soo hadal qaaday gabadha uu dhalay. Wuxuu yidhi “Waxaan dhalay afar wiil, intaas ka dibna waan nuglaaday oo ilmihii shanaad gabadh ayuu iga noqday”.